Global Voices teny Malagasy » Onja COVID-19 vaovao manempotra an’i Taiwan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Mey 2021 3:21 GMT 1	 · Mpanoratra Global Voices East Asia Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Taiwan (ROC), Fahasalamàna, Mediam-bahoaka
Nanomboka tamin'ny 11 May, nahitàna firongatry ny isan'ireo tratry ny aretina i Taiwan, iray amin'ireo firenena tsy dia voa mafy tamin'ny valanaretina COVID-19 , nisy 3.161 no voatily ho mitondra ny viriosy tamin'ity volana ity, araka ny voazan'ny Center for Disease Control (CDC) Ivontoerana Manaramaso ny Aretina ao Taiwan. Talohan'ny May, latsaky ny 1.200 no fitambaran'ireo voarakitra tao Taiwan hoe tratry ny COVID-19 hatramin'ny nanombohan'ilay valanaretina.
Ny 16 May, fepetra fihobohana somary malefaka amin'ny laharana faha-3  no navoakan'ny ministeran'ny fahasalamàna ao Taiwan, toy ny tsy maintsy hanaovana maska eny amin'ny toerana ifaneraseran'ny daholobe ary ny famerana ho 10 ny isan'ireo olona mivorivory eny ankalamanjàna.
Kianin'ireo mpanakiana ary lazainy ho anton'izany foiben'ny valanaretina izany ny nanalefahana ireo fepetra fanibohana  an'ireo mpiasan'ny China Airelines tsy vita vaksiny tamin'ny tapaky ny volana Aprily. Ny 11 May, mpanamory miisa 13 tao amin'ny China Airlines no voatily hoe mitondra ny viriosy COVID-19, ary nisy 30 ny tranga tao an-toerana  nisy fifandraisany tamin'ireo hotely nivahinian'ireo mpiasa nahiboka ireo.
Misy mihoatra ny 100 ireo “sexy tea shops”  any amin'ny distrikan'i Wanhua ary mampiasa olona an'arivony io sehatra io. Tamin'ny 20 May, tranga COVID-19 niisa 299  no nisy fifandraisany tamin'ny distrikan'i Wanhua, izay midika fa mety mbola ho be lavitra noho izany ny fitohitohizan'ny fiparitahan'ilay valanaretina.
Fahabangana miisa telo no hitan’ ilay gazety mpandalina ifotony The Reporter ao anatin'ireo fepetra natao hifehezana ilay valanaretina ao Taiwan, voatondro amin'izany ny tsy fahampian'ny fahafahany mikaroka ireo olona nifampikasokasoka tamin'ny marary, ny tsy fahampian'ny fitiliana PCR ary ny tsy fahampian'ny mpiasan'ny fahasalamàna.
Amin'izao fotoana izao, latsaky ny 16.000 isanandro  ny fahafahana manao fitiliana PCR ao Taiwan. Tsy ataon'ny rafitra napetraka amin'izao fotoana izao ho laharam-pahamehana ny fitiliana ireo nifandray mivantana tamin'ireo efa fantatra fa marary, hoy ny The Reporter mitatitra.
One hospital in Taipei's Zhongzheng District and another in New Taipei's Xizhi District on Thursday announced full closure and partial closure, respectively, after they found employees infected with #COVID -19.https://t.co/kZ27otXfLn 
Tamin'ny Alakamisy, hôpitaly iray ao amin'ny distrikan'i Zhongzheng ao Taipei ary iray hafa ao amin'ny distrikan'i Xizhi ao Taipei Vaovao no nanambara fikatonana tanteraka na amin'ny ampahany, taorian'ny nahitan-dry zareo fa misy mpiasa tratry ny #COVID -19.https://t.co/kZ27otXfLn 
Na ohatra aza ny governamanta ao Taiwan nametraka haingana toerana vaovao fanaovana fitiliana, tsy ampy mpiasan'ny fahasalamana  sy fitaovana hitsaboana ireny toerana ireny, eny fa na dia ilay taho kely misy vovondandihazo aza. Ny tsy fahampian'ny mpiasan'ny labôratoara dia midika fa tsy ho vita ihany koa ny hanao fitiliana PCR 24 ora amin'ny 24 ora.
Navoitran'ny fiparitahan'ilay valanaretina hoe hatraiza no zakan'i Taiwan amin'ny fandraisana ireo mpiasan'ny hôpitaly hatrany am-piandohan'ilay valanaretina. Efa hatramin'ny 2012  no nisintona lakolosy momba ilay olana ny “fikambanana medikaly ho an'ny rariny arak'asa sy ny fitonian'ny marary”. Ambaran'ilay vondrona fa karama vary masaka no raisin'ireo mpiasan'ny fahasalamàna no sady mbola asaina miasa mihoatra ny ora tokony ho izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/27/152825/
 valanaretina COVID-19: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic
 araka ny : https://nidss.cdc.gov.tw/nndss/disease?id=19CoV
 fepetra fihobohana somary malefaka amin'ny laharana faha-3: https://focustaiwan.tw/politics/202105210017
 ny nanalefahana ireo fepetra fanibohana: https://focustaiwan.tw/society/202104150013
 30 ny tranga tao an-toerana: https://www.thenewslens.com/article/150820
 mihoatra ny 100 ireo “sexy tea shops”: https://city.gvm.com.tw/article/79608
 tranga COVID-19 niisa 299: https://www.storm.mg/article/3694781
 May 20, 2021: https://twitter.com/Focus_Taiwan/status/1395242429142294533?ref_src=twsrc%5Etfw
 tsy ampy mpiasan'ny fahasalamana: https://udn.com/news/story/122173/5479222?fbclid=IwAR2VSR3nGyv-dLPklKp7b_2K4Ipvydsin4-GpJjAdrDUri_Mgr7cSNgUzkY
 hatramin'ny 2012: https://globalvoices.org/2012/08/28/taiwan-national-health-insurance-system-in-crisis/